Akşener'den Kanal Istanbul မှတ်ချက် - 'ဒီဟာကအစ္စတန်ဘူလ်ရှိဆရာများအတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု' ။ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Akşener'den Kanal Istanbul မှတ်ချက် - 'ဒီဟာကအစ္စတန်ဘူလ်ရှိဆရာများအတွက်လုပ်ရပ်တစ်ခု'
Akşener'den Kanal Istanbul မှတ်ချက် - 'ဒီဟာကအစ္စတန်ဘူလ်ရှိဆရာများအတွက်လုပ်ရပ်တစ်ခု'
10 / 01 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
aksenerden တူးမြောင်း istanbul မှတ်ချက်သည်ဤ istanbullular သင်ကြားခြင်း၏လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်
GOOD ပါတီဥက္ကChairman္ဌ Meral Akşenerက IMM မှစီစဉ်သောİstanbul Channel Istanbul Workshop တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ Akşenerက“ ဒီရုပ်သံလိုင်းဟာအစ္စတန်ဘူလ်ကို ၉ နှစ်ကြာအာရုံမစိုက်ခဲ့ဘူး။ Fatih Sultan Mehmet ၏ယုံကြည်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြောသူများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ 'Ecdat ecdat' သည်သေတမ်းစာနှင့်အညီထွက်ခွာခဲ့သနည်း။ အမှတ် ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲသိလား မတ်လ9ရက်နေ့တွင် Ekrem သမ္မတရွေးချယ်ခြင်းသည်။ သင်လူကြီးလူကောင်းကိုစိတ်ဆိုးပါတယ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်အစ္စတန်ဘူလ်လူမျိုးအားလုံးက Ekrem amomamoğluကို ၈၀၄၀၀၀ မဲဖြင့်ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ သင်လူကြီးလူကောင်းကိုနှစ်ကြိမ်စိတ်ဆိုးပါတယ် ဒါဟာအစ္စတန်ဘူလ်လူတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့လုပ်ရပ်ပါ။
GOOD ပါတီဥက္ကMer္ဌ Meral Akşenerက Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ကစီစဉ်သည့်İstanbul Channel Istanbul Workshop တွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကတူရကီနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖျော Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်Akşenerတစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်ဟုသူကဆိုသည်: ကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့ရုတ်တရက်အဘယ်ကြောင့်အားလုံးနားမလည်နိုင်ခင် "တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ကိုးနှစ်အာရုံစိုက်မရ, ယူဆောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမည်သည့်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သလဲ အမှတ် သူသည် (၉) နှစ်လုံးလုံးအိပ်ပျော်နေပြီးယနေ့အဘယ်ကြောင့်ထွက်ပြေးနေရသနည်း။ အမှတ် တူရကီကြီးမားသောအကျိုးအမြတ်ပေးသွားမှာပါလား? အမှတ် အစ္စတန်ဘူလ်ကိုလန်းဆန်းစေမလား? အမှတ် Fatih Sultan Mehmet ၏ယုံကြည်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြောသူများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ 'Ecdat ecdat' သည်သေတမ်းစာနှင့်အညီထွက်ခွာခဲ့သနည်း။ အမှတ် ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲသိလား မတ်လ9ရက်နေ့တွင် Ekrem သမ္မတရွေးချယ်ခြင်းသည်။ သင်လူကြီးလူကောင်းကိုစိတ်ဆိုးပါတယ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်အစ္စတန်ဘူလ်လူမျိုးအားလုံးက Ekrem amomamoğluကို ၈၀၄၀၀၀ မဲဖြင့်ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။ သင်လူကြီးလူကောင်းကိုနှစ်ကြိမ်စိတ်ဆိုးပါတယ် ဤသည် Istanbulites သင်ကြား၏လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ "
“ ဒီချန်နယ်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်သလဲ။ ”
Nereden ဒီ Channel ကဘယ်ကနေလာတာလဲ။ မင်းကသမ္မတပါ။ မင်းအနိုင်ရခဲ့ရင်တော့ဒါကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤသည်မှာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါဆိုလိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်မစ္စတာအာဒိုဂန်ကသူ့ကိုယ်သူဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဖခင်လို့သတ်မှတ်တယ် တစ်ခုမှာဤသို့သောစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိပါ။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာarchကရာဇ်မင်းစိုးစံတော်မူသည်။ နန်းတော်များနန်းတက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ပေါ်ထွက်လိုသည့်အယူအဆ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်အာဒိုဂန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏အာရုံကြောများကိုစိတ်ပျက်စေသောလူများဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစ္စတန်ဘူလ်ပြည်သူတွေကိုအပြစ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်သည်ဤတိုင်းပြည်အတွင်းရှိအရာအားလုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုသောရှုထောင့်၏ထင်ရှားပြသမှုပင်ဖြစ်သည်။ "တန်ခိုးကငါ့လက်ထဲမှာရှိတယ်။ အဲဒါက 'ငါလိုချင်ရင်လူတိုင်းကိုငါခေါင်းထဲရိုက်မယ်' လို့ပြောတာပါ။
“ အစ္စတန်ဘူလ်လူမျိုးကငါလိုချင်တဲ့ဒီဘင်ကိုမပြောဘူး၊ မင်းရဲ့သဘောထားပဲရှိတယ်။ ငါလက်မှတ်ထိုးရန်သွား၏ အဲဒီအချိန်ကရပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ရင့်ကျက်မှု… Istanbulite ကဒီမသေချာမရေရာတဲ့စီမံကိန်းကိုငြင်းပယ်လိမ့်မယ်။ ငါယုံတယ် အစ္စလာမ်တန်ပြည်သူတွေကဒီပြစ်ဒဏ်ကိုမဲပေးပြီးတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်
Akşener'inထံမှ Meral သည်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားမှပင်လယ်နက်ကပြောပါတယ်
ဘီဘီစီ Marmaray ဖွင့်ပွဲမှတ်ချက်ကွဲ
မြန်နှုန်းဟာ CHP Thompson ကမှမှတ်ချက်များကိုလေ့
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Altepe'ye cable ကိုကားတစ်စီးမှတ်ချက်ထံမှ
စပိန်အတွက် TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာပြန်လည်သုံးသပ်ရန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Altepe'ye cable ကိုကားတစ်စီးမှတ်ချက်ထံမှ
မြန်ရထားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကနေ Mustafa Balkaya
Kocaoglu ပေါ်လာတာဟာအရင်ဟာ AK ပါတီရွေးကောက်ပွဲကြေငြာစာတမ်းတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ဝင်ရောက်
ဖြောင့်မတ်ခရီးသည်ထံမှ Kocaoglu ... ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုသပိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
တူရကီအတွက်မီးရထားအဖြစ်ဆိုး "Marsandiz ကိုယူမှအနှေး!" သင်တန်းတွင်ထုတ်ပေး
အစ္စတန်ဘူလ် Sabiha Gokcen အပေါ် AnadoluJet ပိုမိုနီးကပ်စွာများမှာ
Channel Istanbul အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ